10 Arrimood Oo Sababa Wadne Xanuun - Daryeel Magazine
10 Arrimood Oo Sababa Wadne Xanuun
Xanuunada ku dhaca wadnaha,ayaa noqday kuwo ihtimaam badan la siiyo wakhtiyadan ugu danbaysay guud ahaanba caalamka. gaar ahaana,waddamada awooda badan ee dhinaca Warshedaha ka horumaray.
waxaana Ururka Dawladda Maraykanka u qaabilsan xanuunadda ku dhaca Wadnuhu uu soo saaray warbixin ka hadlaysa muhiimadda ay leedahay in hoos loo dhigo tiradda uu soo ridanayo Cudurkani, iyada oo la adeegsanayo Wacyi-galin baalaadhan oo dadka loo samaynayo. gaar ahaana kuwa ku nool Dhulka Wershadlayda ah.
Hay’adda dunida u qaabilsan Caafimaadka Adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano WHO, ayaa sheegtay in xanuunadda ku dhaca Wadnaha iyo xididada dhiiga qaada sida Halbawlayaasha iyo Aroorayaasha ay yihiin 30% guud ahaanba dadka caalamka geeriyoodaa ay u geeriyoodaan Wadne Xanuun ama mid ku yimid xidida dhiiga qaada ee jidhka bani’aadamka. Haddaba akhriste halkan kaga bogo toban arrimood oo sabab u noqda in qofka uu la soo darso wadne xanuun ama xanuun ku dhaca xididada dhiiga qaada.
Waxaana ay kala yihiin:
1- Kor u kac ku yimaada heerka Kalastaroolka cufnaantiisu ay hoosayso ee jidhka dhibaatada u keeno, iyadda oo ay dhacayso hoos u dhac ku yimaada heerka Kalastaroolka jidhka u fiican.
2- Qofka oo uu asiibo xanuunka macaanku. kaas oo aan qaadan daaweyn nidaamsan oo dhamaystiran. Cadaadiska dhiiga oo kor u kaca.
3- Baruurta badan gaar ahaana ta kasoo baxda Caloosha hareeraheeda.
4- Jiritaanka hab dhaxaltooyo oo caruurta usoo gudbinaya Xanuunka oo Aabuhu ama Hooyaddu qabto.
5- Qofka oo aan jimisci badan samayn.
6- Qofka oo da’da gaadha.
8. Waxa kale oo uu ku gudbi karaa Jinsi ahaan.
9- Cadaadiska dhiiga oo aad u sarreeya ama dhiig kar
10- Stress-ka badan
Bunka Waxa Uu Yareeyaa Wadne Xanuunka Iyo Macaanka Faaidada Beytaraafku U Leeyahay Dadka Qaba Dhiig-karka Iyo Wadne Xanuunka Cuntooyinka Ka Hortagga Wadne Qabadka Sida Aadka Ahna U Nadiifiya Xididdada Wadnaha Waxyaabaha Sababa Caado Wareerka Dumarka